‘रोमियो एण्ड मुना’ र ‘बाँध मायाले’ फ्लप भयो, अब के गर्छिन सृष्टि? – Fewa Times
‘रोमियो एण्ड मुना’ र ‘बाँध मायाले’ फ्लप भयो, अब के गर्छिन सृष्टि?
प्रकाशित मिति: October 10, 2018 12:02 pm
काठमाडौं – हुन त फिल्म हिट हुने वा फ्लप हुनेमा कलाकारको मात्र हात हुन्न । इनिसियल व्यापारमा कलाकारको हात भएपनि हिट हुने मुख्य आधार भनेको फिल्मको कथाबस्तु नै हो ।
‘गाजलु’बाट फिल्म रजतपटमा भित्रिएकी मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठले पहिलो फिल्मबाट निकै चर्चा पाइन् । उनले गाजलुमा अनमोल केसीको जोडी भएर काम गरेकी थिइन् । त्यस फिल्मबाट सृष्टिलाई फिल्म क्षेत्रको आशलाग्दो कलाकारको रुपमा हेरिएको छ ।
गाजलु पश्चात केही समय ग्याप गरेर सृष्टिले फिल्म ‘रोमियो एण्ड मुना’मा काम गरिन् । फिल्म उनले निर्वाह गरेको भूमिकाले प्रशंसा नै पायो । तर, सोचे जति दर्शकको साथ पाएन् । फिल्म फ्लपको सुचिमा पर्‍यो । सफलताको यात्रामा उनी चुक्न पुगिन् ।
असोज ५ गते उनी अभिनित फिल्म ‘बाँध मायाले’ रिलिज भयो । उक्त फिल्मले त हलमा पानी पनि भन्न पाएन । एकै दिन तीन फिल्म रिलिज भएको र हिन्दी फिल्मको दवदवा रहेकोले पनि फिल्मले दर्शक पाएन् । सफलताको यात्रामा उनी दोस्रो पटक पनि चुक्न पुगिन् ।
उनी अभिनित दुई फिल्म लगतार फ्लप भएपछि सृष्टि अहिले फिल्ममा काम गरेकी छैनन् । उनी अहिले कुनै पनि फिल्ममा आबद्ध पनि भएको थाहा पाइएको छैन् । सायद, उनलाई फिल्ममा लिने बेला निर्माता निर्देशकले सोच्न थालेका छन् ।
जे होस्, फिल्म सफल होस् वा नहोस् उनी प्रेममा भने सफल छिन् । उनी अहिले नायक सौगात मल्लको प्रेममा रमाइरहेकी छिन् ।